Ukuthenga nokuhlengwa auto ngobugebengu Lipetsk.
Ngeshwa, akekho usephephile izimo ezingalindelekile endleleni ngenxa lapho imoto ozithandayo siphukile. Thengisa imoto ephukile ayikwazi ukulungiswa, ke kuyinkinga ngokwakho usesimweni esinjalo ukusetshenziswa enengqondo kunazo zonke "ukuthenga izimoto eziphukile," ezosiza ukuthengisa imoto eziphukile ngaphandle kokuphazanyiswa futhi uthole ngoba inani eliphezulu kungenzeka.
Yiqiniso, ungakwazi eyakho ukuthengisa izingxenye umshini ephukile, ngoba lokhu kuzomele ukuqaqa, ukuhlanza imininingwane, ukuhlola. Kuyadingeka ukuba ulwazi, ukuqonda isimo, futhi lesisho on the yesibili izingxenye emakethe ukuba kusebenze ukudayiswa inzuzo, futhi lokhu kuzothatha isikhathi esiningi kanye nolwazi. izinto eziningi kakhulu ukuba aqhakanjisiwe ngokufaka umthengi imali eningi.
Nje eminyakeni embalwa edlule, ukuthenga izimoto eziphukile, kuyinto ukulahlwa elula, ephukile imoto ukulethwa ngentengo Scrap ayoni. umsebenzi yenkampani kuhloswe ukuthola esiphezulu bezuza eside umshini ofanele.
Xhumana inkampani «Aleks Avto »futhi uzothola usizo futhi abathengayo seqiniso, ngubani uzosihlenga izimoto e Lipetsk, ngisize nge ukubhalisa wonke amadokhumenti adingekayo, ngokushesha ukukhiqiza lokukhokha.
Le nkampani inikeza ngamasevisi alandelayo:
Ngokusho ikheli eshiwo iklayenti ngesikhathi esikahle, ngeke asondele Ochwepheshe.
Ochwepheshe zethu izofika endaweni yokupaka imoto yakho, afeze konke isimo umsebenzi nokuhlola imoto, ngaphandle kwemali ethe xaxa.
Ngemva wokuhlola kanye nokuhlolwa, ke siyonikwa ukuqinisekisa amanani angcono ukuwedlula wonke imoto. Khona-ke isinqumo senziwe ngokuthenga izimoto eziphukile, futhi uma izifiso iklayenti ye lemali ikhokhwe.
Batakulana umshini eziphukile, yokupaka yayo okuningi ukwenza igumbi kule egalaji.
Inikeza usizo lwezomthetho ekulungiseleleni imibhalo, kubandakanya amaphoyisa omgwaqo.
Okwenziwayo izimoto lokuzihlenga Lipetsk, ephelezelwa zonke kwedokodo lomthetho elidingekayo.
Iklayenti uthola imibhalo igcwaliswe nemali ngaphandle kokuhlupheka, isikhathi esichithwa ehamba uchungechunge umyalo.
Ngaphezu kwalokho, leli thuba sokuqeda nokubambisana kunoma yisiphi isigaba kuthengiselana, uma kungukuthi aneliseke ukuthi - leyo ngxenye.
Ukuphendukela inkampani, uthola amadili best ngentengo, ugcine isikhathi sakho, zisindise kusukela izindleko ezengeziwe ukukhokhela izinsizakalo appraisers, ezokuthutha iphahlazeka imoto nokulahlekelwa isikhathi ku wamaphepha.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nohlelo olusebenzisayo kanye nokuthengwa kabusha izimoto e Lipetsk, ungavakashela indawo ikhasi http://aleksavto.ru. Kukhona amafoni esohlwini, okuyinto ungabiza futhi uthole yonke imininingwane kusuka abaphathi bethu. Ungakwazi ubhalele eposini at 5177038 @ imeyili. ru, uzothola izimpendulo oluphelele kuyo yonke imibuzo yabo.
"Oka". Izici imoto yakho
Ukuphepha ngesikhathi BMW 520
Sedans, izimoto ezemidlalo, SUV, esiteshini izinqola, amancane - zonke model of "Toyota" sezivamile eRussia
Kobushiqela wezombusazwe. ezinye izimpawu
Arkan Fool (Tarot) amakhadi Inani ubudlelwano nothando
Yini edingekayo ukuze Hosting Inthanethi